Wanta tokko islaaydii ammaa irraa filuuf, meeshaa (xiyya adii) kabala fakkasaa irraa Select cuqaasi, kana booda wanticha cuqaasi.
Wanta tokko caalu filuuf, osoo cuqaastu Shift dhiibi.
Wantaa isa wantaa kabiroo booda filuuf, DirqalaAlt dhiibi, kan booda wanticha cuqaasi. Kabbaa keessaa wanta xabboo itti aanuu filuuf, Dirqala Alt dhiibi, kan booda deebisii cuqaasi. Filannoo gara wantaa duraan filatameetti deebisuuf, Shift + DirqalaAlt dhiibi, kan booda cuqaasi.
Barruu wanta filatame tokkotti ida'uuf, wanticha lama-cuqaasitii, barruu kee barreessi yk galchi.
Filannoo tokko haquuf, ala wanta filatamee bakka barbaadde cuqaasi, yk Escape dhiibi.
Bakka ati galmee ammaa kee keessatti harkisteetti, rektaangilii guutamte tokko fakkasa. Bakka golee rektaangiliicha kaa'uu barbaadu cuqaasi, hamamtaa barbaadu hamma argatutti harkiisi. Arfakkuu fakkasuuf, yeroo harkiistu Shift dhiibi.
Bakka ati galmee kee ammaa keessatti harkisteetti, luggee guutamte tokko fakkasa. Bakka luggee itti kaasuu barbaadu cuqaasi, hamamtaa barbaadu hamma argatutti harkiisi. Geengoo fakkasuuf, yeroo harkiistu Shift dhiibi.
Fakkasaa kee irratti tuqaalee gulaaluu si dandeessisa.
Fakkasaa kee irratti tuqaalee cuftii gulaaluu si dandeessisa.
Kuusaa Faayaa Dalaga bocquu
Meeshaan kun wanticha marsuuf fayada.
Wantawwan filatamaniif, banaa fi dhaamaa galteewwan G-3 jijjiira.